HIM | Health in Myanmar » 2013 » January
Author: HimBur | Category: Myanmar, Newsno comments | Tags: AIDS, HIV, ကလေး, အကူအညီ
Land donation for HIV centre
The [him] moderator is confused. Is the Venerable Sayadaw donating land or is the Sangha donating land? [him] moderator ++++++++++++++++++ Venerable monk donates land for HIV/AIDS centre Eleven Wednesday, 30 January 2013 16:25 A new centre for the prevention and treatment of HIV/AIDS will open in Yangon Region’s west district later this year on land […]
အမေးအဖြေ (၁၁၅) (၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ)
Author: HimBur | Category: ၁၈နှစ်ပြည့်မှဖတ်ပါ။, Myanmar, Q&A1 comment | Tags: HIV, ကျန်းမာရေး အသိ, ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
မိန်းကလေးမှာ ပိုးရှိနေရင်၊ ယောက်ျားလေးရဲ့ လိင်အင်္ဂါမှာ သွေး+အရည်ဝင်လာစေနိုင်မဲ့ အပါက်အပြဲ၊ အနာအဆာ ရှိနေရင်တော့ ပိုးဝင်ချင်ဝင်နိုင်တယ်။ သုက်ထွက်ခြင်းနဲ့တော့ မသက်ဆိုင်ပါ။ ပြောပြချက်အရ ထိစပ်ချိန်တော့ နည်းတယ်လို့မှတ်ယူနိုင်တာပေါ့။ ရာနှုန်းပြည့်တော့ မပြောနိုင်ပါ။ ဖြစ်ခဲ့ပြီးသားအတွက် မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ အကာအကွယ်မပါဘဲ ဆက်ဆံမိတာတောင်မှ အခါတိုင်းကနေ မကူးတတ်ပါ။
What happened to the million dollars from the ADB?
What happened to the much-anticipated ADB HIV funding? http://www.hivinfo4mm.org/adb-is-going-ahead-without-any-evidence/ Last time the [him] moderator heard about HIV activities there was going to be $US 1 million to be spent near roads, despite the lack of evidence that people along those roads were at risk. Or is the HIV funding hidden under the term ‘road’? Is […]
The World Bank and HIV in Myanmar
The WB has wisely decided to avoid HIV in Myanmar. Here are three sites that you may want to takealook at. http://blogs.worldbank.org/impactevaluations/power-to-the-people-taking-a-look-at-community-driven-reconstruction-in-the-drc http://www.brettonwoodsproject.org/art-571868 Oh, and here is one about the MM debt. http://blogs.cgdev.org/globaldevelopment/2013/01/myanmar-and-the-donors-together-again.php [him] moderator
Author: HimBur | Category: Myanmar, Newsno comments | Tags: AIDS, HIV, MRTV-4, ကုသမှု
ကမ္ဘောဒီးယား နိုင်ငံတွင် HIV/AIDS ရောဂါ ဝေဒနာ ခံစားနေရသူများအား လူအများက ယနေ့ခေတ်တိုင် ၀ိုင်းပယ်ထားကြပြီး အပြစ်သားများ သဖွယ် ဆက်ဆံမှုများ ရှိနေဆဲ ဖြစ်သည်။ ၄င်းတို့အား အများစုက လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းမှ ဖယ်ထားကြပြီး လူမှုရေးကိစ္စ အတော်များများတွင် ဆက်သွယ်မှု လုံးဝဖြတ်တောက် ထားကြသည်။
ကျားလိင်အင်္ဂါ ဆေးထိုးခြင်း (၂)
Author: HimBur | Category: ၁၈နှစ်ပြည့်မှဖတ်ပါ။, Myanmar, Q&A2 comments | Tags: ကျန်းမာရေး အသိ, အမျိုးသား, ဒေါက်တာတင့်ဆွေ
ကျားလိင်အင်္ဂါထဲမှာ ရှိတာက ကြွက်သားမဟုတ်ပါ။ Corpora Cavernosa Penis အသားပွက အဓိက အများဆုံး ဖြစ် တယ်။ ဆေးထိုးရင် အဲဒီထဲရောက်မှာများတယ်။ သူ့ကို Fibrous envelope အရွှတ်လွှာ ၂ မျိုးနဲ့ ဖုံးထားတယ်။ Corpus Cavernosum Urethræ ဆိုတာက ဆီးထွက်လမ်း ဖြစ်တယ်။ ကျန်တာက သွေးလွှတ်ကြော၊ သွေးပြန်ကြောနဲ့ အာရုံကြောတွေ ရှိတယ်။
အမေးအဖြေ (၁၁၄) (၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ)
HIV စစ်ပြီးလို့ မတွေ့ရင် စိတ်အေးချမ်းသာရှိပါ။ အရေပြားဖြစ်တာကို တခြားအရေပြားရောဂါ တခုခုလို့ အာရုံစိုက်ရ ပါမယ်။ ပိုးတခုခုသာရှိရင် ပြောတဲ့ဆေးနဲ့ ပျောက်ပါမယ်။ (အလာဂျီ) သဘောဖြစ်နောအတွက် Cetrizine တည ၁ ပြားသောက်နိုင်ပါတယ်။ တော်တော်နဲ့ မပျောက်သေးရင် ဆေးတခုခုရွေးလိမ်းရမယ်။ လောလောဆည် Calamine lotion လိမ်းနိုင်တယ်။
Asia Catalyst isasolid organisation working on the right to health. If you are interested in this new training activity please email the [him] moderator at hiv.information.for.myanmar@gmail.com for an application form. [him] moderator ++++++++++++++++++ Asia Catalyst,anonprofit that works with East and Southeast Asian advocates to promote the right to health, is launching […]
The English language HIV Information for Myanmar [him] service has sent out over two thousand email messages. The first couple of hundred were not numbered. Read on, [him] moderator
One thousandth posting by email in Burmese
The Burmese language part of HIV Information for Myanmar [him] has just made its one thousandth email posting. If you would like to subscribe you can email HimBurmese@gmail.com and ask to subscribe. You can also read the blog version of [him] in Burmese at http://www.hivinfo4mm.org/. [him] moderator